आफ्नो कपाल कति स्वस्थ्य छ ? यसरी थाहा पाउने - ज्ञानविज्ञान
आफ्नो कपाल कति स्वस्थ्य छ ? यसरी थाहा पाउने
कपालमा किन धेरै समस्या देखिन्छन्, कपाल किन सुख्खा हुन्छ, किन रुखो हुन्छ, किन चाया पर्छ, किन र्झछ ? त्यो स्वस्थ्य कपालको संकेत हो । अक्सर स्वस्थ्य र सन्तुलित खानपान नगर्ने, रसायनयुक्त हेयर प्रोडक्ट प्रयोग गर्ने र सहि तरिकाले कपालको हेरचाह नगर्नु नै यसको मूल कारण हो । कतिपय अवस्थामा हामीलाई थाहा हुन्न कि, हाम्रो कपाल स्वस्थ्य छ वा छैन ।
Topics #कपाल #स्वस्थ्य
Don't Miss it के तपाईलाई थाहा छ ? कसरी स्वस्थ्य र सुमधुर हुन्छ दाम्पत्य सम्बन्ध, थाहा पाउनुहोस् ।
Up Next गर्मीमा घरलाई सितल राख्न यी तरिका
तनावरहित हुने तनावका कारण मानसिकसँगै शारीरिक रोग लाग्ने जोखिम बढ्ने भएकाले तनाव कम गर्न योग गर्ने, मनमा नराम्रो कुरा…